Lahatsoratra nataon'i Jayson DeMers momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Jayson DeMers
Jayson DeMers no mpanorina & CEO an'ny EmailAnalytics, fitaovana fampitaovana mamokatra izay mifandray amin'ny kaonty Gmail na G Suite misy anao ary maka sary an-tsaina ny asanao amin'ny mailaka - na ny an'ny mpiasanao. Araho izy Twitter or LinkedIn.
Tetika SEO 5 lehibe izay azon'ny mpanao mozika mitolona
Alakamisy, Jolay 18, 2013 Jayson DeMers
Ka ianao dia mpitendry zavamaneno mitady hanao fanambarana an-tserasera ary mieritreritra ny hahatonga ny teknikan'ny motera fikarohana (SEO) handeha aminao? Raha izany no izy, dia atoro anao fa, na dia tsy misy bala majika amin'ny fanatsarana ny motera fikarohana aza dia tsy sarotra koa ny manatsara ny fahitana ny fikarohana ao amin'i Google sy Bing. Ireto misy teknika SEO mahomby dimy ho an'ny mpitendry mozika hanatsarana ny fahitana ny motera fikarohana. 1. Ny fomba fitorahana bilaogy dia fomba tsara
Famantarana 6 Tonga ny fotoana handefasana ny lozisialy Analytics
Talata, Jolay 9, 2013 Jayson DeMers
Ny vahaolana rindrambaiko voadinika tsara (BI) vita tsara dia zava-dehibe amin'ny fikambanana rehetra te-hamantatra ny ROI amin'ny ezak'izy ireo amin'ny Internet. Na ny fanarahana ny tetikasa, ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing amin'ny mailaka, na ny fanombanana mialoha, ny orinasa dia tsy afaka miroborobo raha tsy manara-maso ireo faritra mitombo sy manana fotoana azo anaovana tatitra. Ny rindrambaiko Analytics dia handany fotoana sy vola fotsiny raha tsy maka sary marina momba ny fahombiazan'ny orinasa. Topazo maso ireto antony enina ireto handatsahana iray
Ahoana ny fomba hanaovana SEO eo an-toerana mahomby amin'ny teti-bola
Alahady, Jona 23, 2013 Alahady, Jona 23, 2013 Jayson DeMers
Rehefa mandeha ny fotoana dia lasa henjana sy henjana kokoa ny SEO, saingy tokony hidika ve izany fa lafo kokoa? Tsy ny orinasa rehetra mila serivisy SEO dia mifototra amin'ny Internet na mifandraika amin'ny IT. Raha ny marina, ny ankamaroany dia orinasa kely eo an-toerana izay manompo faritra iray manokana. Mila SEO ao an-toerana ireto olona ireto fa tsy SEO nentim-paharazana, nasionaly. Orinasa sy olon-tsotra eo an-toerana - mpitsabo nify, mpipaipaika, fivarotana akanjo, fivarotana elektronika —tsy tena mila filana maika amin'ny laharam-pahamehana amin'ny karoka manerantany
Fomba 5 hahatonga ny mpanjifanao ho tian'izy ireo
Talata, Jona 11, 2013 Jayson DeMers
Ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia mitaky zavatra bebe kokoa noho ny tsiky fotsiny, na dia fanombohana tsara aza izany. Ny mpanjifa sambatra dia mitarika amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny asa aman-draharaha, ny fitomboan'ny hevitra tsara (izay mampisondrotra ny SEO eo an-toerana), ary ny fampitomboana ireo fambara sosialy miaraka amin'ny fihetseham-po miabo (izay manavaka ny fahitana ny fikarohana voajanahary amin'ny ankapobeny), ary tsy misy orinasa afaka misy raha tsy misy ny mpanjifany. Ireto misy fomba dimy mora azo antoka fa hahatsapa ho tiana ny mpanjifanao. 1. Mametraha fanontaniana mety. Ny orinasa tsirairay dia tokony hametraka an'io fanontaniana io isan'andro: Inona
Ahoana ny fomba hampitomboana ny fampiroboroboana ny mpihaino sy ny fahazoana valiny
Alarobia, Jona 5, 2013 Jayson DeMers
Ny famoronana buzz manodidina ny orinasa iray ary hahatonga ny mpihaino anao ho liana amin'ny vokatrao na serivisinao no dingana voalohany amin'ny fananganana vondrom-piarahamonina tsy mivadika. Amin'ny fotoana fohy, mety hitarika amin'ny fitomboan'ny fifamoivoizana sy ny varotra izany. Amin'ny fotoana maharitra, ity dia afaka mametraka legiona ambasadaoro marika izay miasa tahaka ny ekipa mpivarotra guerilla. Satria ny fandresena ny fon'ny demografikao dia miankina betsaka amin'ny fandraisana anjaran'ny mpihaino, zava-dehibe ny fampiasana azy